आमा बन्दै नेहा कक्कड – SaipalNews.com
काठमाडौं ६ साउन । गायिका नेहा कक्कडले गत वर्ष रोहनप्रित सिंहसँग विवाह गरेकी हुन् । विवाहलगत्तै उनी गर्भवती भएको खबर बाहिर आएको थियो । सो खबरको विषयमा नेहा केही बोलिनन् । किनभने सो समय उक्त खबर उनको नयाँ गीतको प्रमोसन स्टन बाहेक केही थिएन । उक्त खबरका लागि फ्यानले उनलाई निकै ट्रोल गरेका थिए । अहिले फेरि नेहा गर्भवती भएको खबर चर्चामा छ ।
नेहा र रोहन एक दोस्रोलाई निकै प्रेम गर्छन् । उनीहरु अक्सर आफ्नो प्रेम सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन् । केहीदिन पहिले दुबै एयरपोर्टमा देखिएका थिए । केही समयदेखि नेहाको पहिरन सेन्स समेत केही परिवर्तन भएको छ । नेहा र रोहनको केही फरक स्माइलमा जुन तस्बिर बाहिर आएको छ । त्यसले नेहा गर्भवती भएको संकेत समेत दिएको छ ।
नेहाले इन्स्टाग्राममा केही तस्बिर समेत शेयर गरेकी छन् । जसमा उनले पर्पल कलरको पहिरन लगाएकी छन् । यो पहिरनमा उनले रोहनप्रितका साथ प्रेमले भरिएको तस्बिर खिचाएकी छन् । धेरै तस्बिर उनले साइट पोजमा दिएकी छन् । यसले पनि उनी गर्भवती भएको अनुमानमा बल पुगेको छ ।
नेहा कामका पनि निकै सक्रिय रहने व्यक्ति हुन् । उनी टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा केही दिनको अन्तरमा चर्चामा छाउने गर्थिन् । अहिले भने उनी लामो समयसम्म इन्डियन आइडल सेटमा देखिएकी छैनन् । यसकारण पनि अनुमान गरिएको छ गर्भाअवस्थाका कारण उनले इन्डियन आइडलबाट केही समयका लागि बिदा लिएकी छन् ।
भागेर पार्टी चल्दैन : डा. रावल
बढी भएको विद्युत् विदेशमा बिक्री गर्न सकिने
छाउपडी गोठमुक्त अभियानमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अछाम
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती, महामारीको खतरा बढ्यो !
सबै मिले पश्चिम सेती १० वर्षमै बन्छ ! त्यसले सुदूरपश्चिमलाई धनी बनाउँछ